निर्मला हराएपछि तारो बनेको त्यो दुई तल्ले घर (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ६)
बटुवाहरु औँला तेर्स्याउँदै भन्छन् – 'निर्मला हराएको बम दिदी बहिनीको घर यही हो नि।'
त्यसमाथि धर्नास्थलमा भएकाहरुले सुनाएका थिए - त्यो घर वरिपरि त पुलिस, सिआइडीहरु छ्याप्छ्याप्ती हुन्छन्। कहाँ पस्न दिन्छन् तपाईँहरुलाई!
हामीसित निर्मला प्रकरणका दुई वटा प्रतिवेदन थिए - एउटा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन र अर्को नेपाल मानवअधिकार संगठन (ह्युरोन) ले गरेको स्थलगत अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन।
असोज १० गते सार्वजनिक गरिएको ह्युरोनको प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदा यस्तो छ -
होटेलमा काम गर्ने रविन्द्रप्रसाद तिवारीलाई हामीले सोध्यौँ। उल्टाखाम वडा नम्बर २ का वडा सदस्यसमेत रहेका उनले भने, 'खै मैले काम गरेको ८/९ वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म त यहाँ डान्सबार देखेको छैन।'
उनी भन्छन् – 'ओपेरामा डान्सबार भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो।'
हामीसित ओपेरामा डान्सबार नभएको बताए पनि उनी, उनकै संगठनका महासचिव महामुनिश्वर आचार्य र नेपाल मानवअधिकार संगठन, कञ्चनपुर शाखाका सभापति त्रिभुवनकुमार भट्ट तीन जनाको अनुगमन टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तयार पारेको हो। त्यसमा स्पष्ट रुपमा 'बम दिदीबहिनी मध्ये जेठी बबिता बम डान्सबारमा डान्सरका रुपमा कार्यरत रहेको र घटना भएको दिन उनी कार्यरत ओपेरा होटलमा 'बर्थ डे पार्टी भएको' उल्लेख छ।
तर, यस्तो संवेदनशील विषयको प्रतिवेदन पनि 'रे' का आधारमा कसरी बनेको होला? ओपेरा होटलमा डान्सबार नभेट्टाएपछि हाम्रो मनमा उठेको यो प्रश्नको जवाफ पाउन सकेनौं।
यसै प्रतिवेदनको सातौँ नम्बरको बुँदामा बम दिदी बहिनीको छिमेकमा भैँसी ब्याउन लागेको र त्यहाँ मान्छे जम्मा भएको उल्लेख छ। र, त्यहाँ भेला भएका मानिसले नै त्यहाँ 'लाश/शव' भन्ने शब्द सुनेको उल्लेख छ। बिहान ४ बजेतिर त्यो घरमा ट्याम्पु/टुकटुक आएको पनि उल्लेख छ।
यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण 'क्लु' थियो। यसलाई हामीले भेरिफाइ गर्ने क्रममा मिडियामा प्रकाशित यो सामाग्री भेट्यौँ जसमा लेखिएको थियो -
भदौ ६ गते बम दिदी बहिनीहरुको घरमा एक समूहले आक्रमण गरेको थियो। ढुंगा हानेर झ्यालका शिशा फुटाइदिएका थिए। त्यसैले छिमेकीहरु नयाँ मान्छेसित कुरा गर्न एकदमै डराउँछन्। 'हामीले बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेका छौँ, मिडियामा बोल्दैनौँ,' भने सुरुमा हामीलाई।
'रे' भन्नेहरु चाहिँ धेरै भेटिए।
हामीले मिडियामा यस्तो समाचार पनि भेट्यौँ -
माथिको गुगल म्यापमा देखिएको घरमध्ये २ नम्बरको घर देवी पाण्डेको हो। उनले हामीलाई भनिन् - 'गाडी आउँछन्। भिआइपी मान्छे आउँछन् भन्ने छ। म नै अचम्ममा छु। म यति नजिकै छु। आजसम्म देखेको छैन। देखेको भए किन लुकाउनु पर्‍यो?'
उनी थप्छिन्, 'बबिता दिउँसो ट्युसन भनेर जान्थी। कहाँ जान्थी, के गर्थी त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर रोशनी घरदेखि स्कूल मात्र गर्थी। त्यो म भन्न सक्छु।'
'सब हावा कुरा। हल्लामात्र हो। हामी यहाँ बसेको कति भयो, एक जना पनि आएका छैनन्। एक जना देखेको मात्र भए हामी पनि यिनीहरुलाई धपाउँथ्यौं,' गणेशले भने।
'हाम्रो नजरमा कति पनि दोषी छैनन्। जिरो पनि दोषी छैनन्, ' सुमित्राले पनि यसै भनिन्।
'अनि आउँछन् भन्छन् त बजारमा, सबैले। किन त?'
'हल्ला कहाँबाट चल्छ थाहा छैन। हामी छिमेकी कसैले देखेको छैन। हुनै नसक्ने हल्ला चल्छ। दिक्क लाग्छ अहिले त। उनीहरूले आँखाले नै देखे जसरी बोल्छन्,' उनीहरुले भने।
निर्मला हराएको दिन साउन १० गतेको कुरा सम्झँदै सुमित्राले भनिन्, 'साउन १० गते यहाँ डान्स, हल्ला खल्ला थियो रे भन्ने हल्लासमेत भयो। मेरी छोरी राति १२ बजेसम्म सुतेकी थिइन। हामी नेट चलाएर बसिरहेका थियौँ। त्यो दिन ९ बजेसम्ममा बत्ती निभाएर सुतिसकेका छन्, यिनीहरु।'
सुमित्राले अझ थपिन्, 'उनीहरूको ठूला मान्छे कोही छैनन्। मेयरका भतिजा, एसपी कोही पनि आएका छैनन्। यो सय प्रतिशत गलत हो। दोष नभई बदनाम गराएका छन्। शङ्कास्पद गतिविधि भएको भए भन्थ्यौँ हामीले पनि। एक जना मान्छे पनि आएको भए आउँथे भन्थ्यौँ। मलाई मात्र हैन सबै छरछिमेकलाई सोध्दा हुन्छ। सबैले एउटै भन्छन्।'
देवीले थपिन्, 'यिनीहरूले गल्ती गरेको भए म पनि चार लात्ती हान्थेँ। उनीहरूलाई समाजबाट हटाउँथेँ। आज गल्ती गरे फेरि भोलि पनि गर्लान्। मेरी पनि छोरी छे। भोलि मेरी छोरीलाई गर्लान्। प्रमाण भए हामी नै लखेट्छौं।'
हामी काठमाडौँबाट त्यहाँ पुगेकाले कञ्चनपुरका सबैलाई स्थानीय बासिन्दा नै देख्छौँ। तर, महेन्द्रनगर बजारका 'स्थानीय बासिन्दा' जसरी बम दिदीबहिनीहरुमाथि औँला ठड्याइरहेका छन्, उनीहरुको घर छेउमै बस्ने छरछिमेकी स्थानीय 'बासिन्दा' हरु भने किन बचाउ गरिरहेका छन् त?
यो प्रश्नको जवाफ हामीले भेट्न सकेनौँ। अनुमान चाहिँ लगायौँ, 'रे' को कारण।
पोलिग्राफमा चक्र बडु 'फेल', बबिता 'पास'
दिदी बबिता बमले भने दुई वटा सिम प्रयोग गरेको देखिन्छ - नेपाल टेलिकमको र एनसेलको। बबिताले एनसेल नेट चलाउनका लागि र एनटिसीको भने फोन गर्नको लागि प्रयोग गर्थिन्। उनीहरुको घरमा वाइफाइ छैन। एनसेलको सिम राति ८ बजेपछि मात्र एक्टिभ हुने गरेको देखियो।
कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेरबहादुर कठायतले बम दिदी बहिनी विरुद्ध कुनै पनि प्रमाण फेला नपरेको बताए। 'उनीहरुको मोबाइलदेखि सबै कुराको अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि ठोस प्रमाण भेटिएन,' उनले भने।